Foomka Codsiga eTA Kanada | Diiwaangelinta eTA Kanada
Qoyska / magaca dambe
Magaca qoyska waxaa sidoo kale loo yaqaannaa Magaca Dambe ama Magaca Dambe
Geli DHAMMAAN magacyada (magacyada) markay ka muuqanayaan baasaaboorkaaga.
Fadlan sheeg magacaaga (yada) (oo sidoo kale loo yaqaan "magac la siiyay") sida saxda ah ee ku qoran baasaboorkaaga ama dukumintigaaga aqoonsiga.
Ku qor magaca magaalada / magaalada / tuulada lagu muujiyey goobta dhalashada ee baasaboorkaaga. Haddii uusan baasaboorkaagu lahayn magaalo, tuulo / tuulo, ku qor magaca / magaalada / tuulada aad ku dhalatay.
Xulo Waddankaaga Dhalashada Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Jacaylku Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Azores Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnia iyo Herzegovina Botswana Brazil British Virgin Islands Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burma (Myanmar) Burundi Cabo Verde Cambodia Cameroon Canada Canary Islands Cayman Islands Central African Republic Chad Channel Islands Chile Shiinaha Shiinaha (Hong Kong SAR) Shiinaha (Macao SAR) Colombia Comoros Cook Islands Costa Rica Croatia Cuba Cyprus Czech Republic Czechoslovakia Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo Denmark Jabuuti Dominika Dominican Republic East Timor Ecuador Masar El Salvador England Equatorial Guinea Eritrea Estonia Itoobiya Falkland Islands (Malvinas) Fiji Finland Fr. Koonfur. iyo Dhulka Antarctic France French Guiana Faransiis Polynesia Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong Hungary Iceland Hindiya Indonesia Iiraan Ciraaq Ireland Israa'iil Italy Ivory Coast Jamaica Japan Urdun Kazakhstan Kenya Kiribati North Korea Koonfurta Kuuriya Kosovo Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lubnaan Lesotho Liberia Liibiya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao Macedonia Madagascar Madeira Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Islands Marshall Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Micronesia, Federaalka ah Moldova Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Namibia Nauru Nepal Netherlands Antilles, The Netherlands Nevis New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Northern Ireland Northern Mariana Islands Norway Cumaan Pakistan Territory Falastiiniyiinta Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Filibiin Poland Portugal Puerto Rico Qadar Jamhuuriyadda Congo Jamhuuriyadda Palau Reunion Romania Russia Rwanda Saint Helena Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Pierre iyo Miquelon Saint-Martin Samoa Samoa, Ameerika San Marino Sao Tomé iyo Principe Saudi Arabia Scotland Senegal Serbia Iyo Montenegro Serbia, Jamhuuriyadda Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Jasiiradaha Solomon Soomaaliya Koonfur Afrika South Sudan Spain Sri Lanka St. Vincent iyo Grenadines ah Sudan Suriname Swaziland Iswidhan Switzerland Suuriya Taiwan Tajikistan Tansaaniya Thailand Tibet (Ismaamulka) Togo Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Turkiga oo Caicos Islands Tuvalu Uganda Ukraine Midowga Soofiyeeti Hantiwadaagga Soofiyeeti United Arab Emirates United States Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vatican City Venezuela Vietnam Virgin Islands, US Wales Wallis iyo Futuna Western Sahara Yemen Yugoslavia Zambia Zimbabwe
Laga soo bilaabo menu-ka-hoos, ka dooro magaca dalka ku yaal Meesha dhalashada ee baasaboorkaaga.
Xaaladda guurka *
Dooro guursaday Marna Guur / Hal furayna Sharci ahaan u kala go'ay sygu
Faahfaahin ka bixi baasaboorka aad ku gali doontid Kanada. Gali faahfaahintaan sida saxda ah ee ku qoran baasaboorkaaga.
Baasaboor / Nooca Dukumentiga Safarka *
Dooro Baasaboor ama nooca dukumeentiga safarka Baasaboor - Caadi ah/ joogto ah Baasaboor - Dublamaasiyad Baasaboor - Rasmi ah Baasaboor - Adeeg Ogolaanshaha dib-u-soo-celinta Maraykanka (I-327) Dokumentiga socdaalka qaxootiga ee US (I-571)
Haddii aadan ku safrin amarro dawladeed oo rasmi ah ama buuxin nooc kasta oo adeeg gaar ah oo la xiriira gobol ama dowlad, waxaad u badan tahay inaad yeelaneyso baasaboor joogto ah
Dalka Baasaboorka / Dukumentiga Safarka *
Xulo Waddanka Baasaboorrada Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Antigua Oo Barbuda Armenia Argentina Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnia iyo Herzegovina Botswana Brazil British Virgin Islands Brunei Bulgaria Burkina Faso Burma (Myanmar) Burundi Cabo Verde Cambodia Cameroon Cayman Islands Central African Republic Chad Chile Shiinaha Shiinaha (Hong Kong SAR) Shiinaha (Macao SAR) Colombia Comoros Costa Rica Croatia Cuba Cyprus Czech Republic Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo Denmark Jabuuti Dominika Dominican Republic East Timor Ecuador Masar El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Itoobiya Micronesia Fiji Finland France Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Greece Grenada Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hungary Iceland Hindiya Indonesia Iiraan Ciraaq Ireland Israa'iil Italy Ivory Coast Jamaica Japan Urdun Kazakhstan Kenya Kiribati Korea, North Korea, South Kosovo Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lubnaan Lesotho Liberia Liibiya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macedonia Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Islands Marshall Mauritania Mauritius Mexico Moldova Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Namibia Nauru Nepal Netherlands New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Northern Mariana Islands Norway Cumaan Pakistan Maamulka Falastiin Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Filibiin Poland Portugal Qadar Jamhuuriyadda Congo Jamhuuriyadda Palau Romania Russia Rwanda Saint Helena Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Samoa San Marino Sao Tomé iyo Principe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Jasiiradaha Solomon Soomaaliya Koonfur Afrika South Sudan Spain Sri Lanka St. Vincent Wadan la'aan Sudan Suriname Swaziland Iswidhan Switzerland Suuriya Taiwan Tajikistan Tansaaniya Thailand Togo Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Turkiga oo Caicos Islands Tuvalu Uganda Boqortooyada Ingiriiska - Brit. Ntl. Dibada Boqortooyada Ingiriiska - Brit. muwaadin dibadeed Ingiriiska ee dibada Boqortooyada Ingiriiska - Brit. qofka la ilaaliyo UK - muwaadin British ah Boqortooyada Ingiriiska - Mawduuca Ingiriiska Ukraine UN ama sarkaal Hay'adda khaaska ah ee UN United Arab Emirates United States Uruguay Uzbekistan Vanuatu Gobolka Vatican Venezuela Vietnam Western Sahara Yemen Zambia Zimbabwe
Dhalashada lagu xusay Baasaboorka / Dukumentiga Safarka *
Dooro jinsiyadda lagu xusay dukumeentiga safarka Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Antigua Oo Barbuda Armenia Argentina Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bhutan Bolivia Bosnia iyo Herzegovina Botswana Brazil Brunei Bulgaria Burkina Faso Burma (Myanmar) Burundi Cabo Verde Cambodia Cameroon Central African Republic Chad Chile Shiinaha Shiinaha (Hong Kong SAR) Shiinaha (Macao SAR) Colombia Comoros Costa Rica Croatia Cuba Cyprus Czech Republic Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo Denmark Jabuuti Dominika Dominican Republic East Timor Ecuador Masar El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Itoobiya Micronesia Fiji Finland France Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Greece Grenada Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hungary Iceland Hindiya Indonesia Iiraan Ciraaq Ireland Israa'iil Italy Ivory Coast Jamaica Japan Urdun Kazakhstan Kenya Kiribati Korea, North Korea, South Kosovo Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lubnaan Lesotho Liberia Liibiya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macedonia Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Islands Marshall Mauritania Mauritius Mexico Moldova Monaco Mongolia Montenegro Morocco Mozambique Namibia Nauru Nepal Netherlands New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Northern Mariana Islands Norway Cumaan Pakistan Maamulka Falastiin Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Filibiin Poland Portugal Qadar Jamhuuriyadda Congo Jamhuuriyadda Palau Romania Russia Rwanda Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Samoa San Marino Sao Tomé iyo Principe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Jasiiradaha Solomon Soomaaliya Koonfur Afrika South Sudan Spain Sri Lanka St. Vincent Wadan la'aan Sudan Suriname Swaziland Iswidhan Switzerland Suuriya Taiwan Tajikistan Tansaaniya Thailand Togo Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Tuvalu Uganda Boqortooyada Ingiriiska - Brit. Ntl. Dibada Boqortooyada Ingiriiska - Brit. muwaadin dibadeed Ingiriiska ee dibada UK - muwaadin British ah Ukraine United Arab Emirates United States Uruguay Uzbekistan Vanuatu Gobolka Vatican Venezuela Vietnam Western Sahara Yemen Zambia Zimbabwe
Ma tahay sharci degane joogto ah oo Mareykan ah oo leh kaarka diiwaangelinta shisheeyaha oo sax ah (Kaarka Cagaaran)? *
Baasaboor / Lambarka Dukumentiga Safarka *
Gali lambarka baasaboorka sida ay ugu muuqato bogga macluumaadka taariikh nololeedkiisa. Fiiro gaar ah u yeelo xarafka O iyo nambarka 0; iyo xarafka I iyo nambarka 1.
Xaqiiji Baasaboorka / Lambarka Dukumentiga Safarka *
Dib-u-gal Lambarka Baasaboorka si aad u xaqiijiso.
Fadlan ogow in safarkan, waa inaad isticmaashaa baasaboor ay bixisay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Taiwan.
Lambarka aqoonsiga Taiwan (sida ku qoran baasaboorka) *
MAYA ETA LOO BAAHAN YAHAY
Iyada oo ku saleysan jawaabahaaga, ujeeddada safarkaaga hadda, uma baahnid ruqsad safar elektaroonik ah (eTA) si aad u booqato Kanada.
Si kastaba ha noqotee, iska hubi inaad sidato dukumiintiyada safarka ee saxda ah iyo aqoonsiga naftaada iyo wixii carruur ah ee kula socdaalaya.
Iyada oo qayb ka ah isbeddeladii ugu dambeeyay ee barnaamijka eTA ee Kanada, Dadka haysta kaarka cagaaran ee Maraykanka ama deganaanshaha rasmiga ah ee Maraykanka (US), uma baahna Kanada eTA.
Dukumentiyada aad u baahan doonto marka aad safrayso
Marka la soo galo, waxaad u baahan doontaa inaad tusto shaqaalaha diyaaradda caddaynta sharcigaaga deganaanshaha rasmiga ah ee Maraykanka
Dhammaan hababka safarka
Markaad timaadid Kanada, sarkaalka adeegyada xuduuduhu wuxuu ku waydiin doonaa inuu arko baasaboorkaaga iyo caddaynta sharcigaaga deganaanshaha rasmiga ah ee Maraykanka ama dukumentiyada kale.
Markaad safrayso, hubi inaad soo qaadato
- Baasaboor sax ah oo ka yimid waddankaaga dhalashada
- caddaynta xaaladdaada deganaanshaha rasmiga ah ee Maraykanka, sida kaarka cagaaran oo shaqaynaya
UMA QALMO ETA
Iyada oo ku saleysan jawaabahaaga, ujeeddada safarkaaga hadda, waxaad tahay aan u qalmin Kanada eTA.
Si kastaba ha ahaatee waxaa laga yaabaa inaad u qalanto fiisaha caadiga ah si aad u booqato Kanada. Wax badan ka baro Shuruudaha gelitaanka Kanada waddan ahaan
CINWAAN IYO FAAHFAAHIN FAAHFAAHIN AH
Geli cinwaanka gurigaaga joogtada ah
Wadada maya, magaca iyo cinwaanka *
Magaalada ama Magaalada la deggan yahay *
Dalka hooyo ama Dalka aad deggan tahay *
Xulo dalka Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Jacaylku Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Azores Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnia iyo Herzegovina Botswana Brazil British Virgin Islands Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burma (Myanmar) Burundi Cabo Verde Cambodia Cameroon Canada Canary Islands Cayman Islands Central African Republic Chad Channel Islands Chile Shiinaha Shiinaha (Hong Kong SAR) Shiinaha (Macao SAR) Colombia Comoros Cook Islands Costa Rica Croatia Cuba Cyprus Czech Republic Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo Denmark Jabuuti Dominika Dominican Republic East Timor Ecuador Masar El Salvador England Equatorial Guinea Eritrea Estonia Itoobiya Falkland Islands (Malvinas) Fiji Finland Fr. Koonfur. iyo Dhulka Antarctic France French Guiana Faransiis Polynesia Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hungary Iceland Hindiya Indonesia Iiraan Ciraaq Ireland Israa'iil Italy Ivory Coast Jamaica Japan Urdun Kazakhstan Kenya Kiribati North Korea Koonfurta Kuuriya Kosovo Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lubnaan Lesotho Liberia Liibiya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao Macedonia Madagascar Madeira Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Islands Marshall Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Micronesia, Federaalka ah Moldova Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Namibia Nauru Nepal Netherlands Antilles, The Netherlands Nevis New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Northern Ireland Northern Mariana Islands Norway Cumaan Pakistan Territory Falastiiniyiinta Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Filibiin Poland Portugal Puerto Rico Qadar Jamhuuriyadda Congo Jamhuuriyadda Palau Reunion Romania Russia Rwanda Saint Helena Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Pierre iyo Miquelon Saint-Martin Samoa Samoa, Ameerika San Marino Sao Tomé iyo Principe Saudi Arabia Scotland Senegal Serbia, Jamhuuriyadda Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Jasiiradaha Solomon Soomaaliya Koonfur Afrika South Sudan Spain Sri Lanka St. Vincent iyo Grenadines ah Sudan Suriname Swaziland Iswidhan Switzerland Suuriya Taiwan Tajikistan Tansaaniya Thailand Togo Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Turkiga oo Caicos Islands Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United States Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vatican City Venezuela Vietnam Virgin Islands, US Wales Wallis iyo Futuna Western Sahara Yemen Zambia Zimbabwe
Lambarka Boosta / ZIP *
Gobol ama Gobol ama Degmo *
Xul gobolka Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware Degmada Of Columbia Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming Puerto Rico
Ujeedada Booqashada *
Dooro Dalxiis transit Business
Fadlan gali ujeedada booqashadaada
Ansaxnimada Visa waxay ka bilaabmi doontaa Taariikhda Bixinta Visa.
Waligaa Kanada ma tagtay? *
Dooro Haa Maya
Fiiso Kanada ama lambar hore (ikhtiyaari)
FAAHFAAHINTA WAALIDKA / MAS'UULKA
Waa inaad tahay ugu yaraan 18 sano jir si aad wax u dalbato ama aad u dalbato qof.
Waalidka / wakiilka ayaa u baahan inuu buuxiyo su'aalaha dheeriga ah.
Cinwaanka boostada *
Lambarka Taleefoonka / Telefoonka *
Xulo Horgalaha Afgaanistaan ​​(+93) Jasiiradaha Aland (+358) Albaniya (+ 355) Algeria (+ 213) Samoa Mareykan ah (+ 1684) Andorra (+ 376) Angola (+ 244) Anguilla (+ 1264) Antarctica (+ 672) Antigua iyo Barbuda (+1268) Argentina (+ 54) Armenia (+ 374) Aruba (+ 297) Australia (+ 61) Austria (+ 43) Azerbaijan (+ 994) Bahamas (+ 1242) Bahrain (+ 973) Bangladesh (+ 880) Barbados (+ 1246) Belarus (+ 375) Belgium (+ 32) Belize (+ 501) Benin (+ 229) Bermuda (+ 1441) Bhutan (+ 975) Bolivia (+ 591) Bonaire, Saint Eustatius iyo Saba (+599) Bosniya iyo Herzegovina (+387) Botswana (+ 267) Brazil (+ 55) Dhul Xeebeedka Badweynta Hindiya ee Ingiriiska (+246) Brunei Darussalam (+673) Bulgaariya (+ 359) Burkina Faso (+ 226) Burundi (+ 257) Kamboodiya (+ 855) Cameroon (+ 237) Kanada (+ 1) Cape Verde (+ 238) Cayman Islands (+ 1345) Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika (+ 236) Jaad (+ 235) Chile (+ 56) Shiinaha (+ 86) Jasiiradda Christmas (+61) Jasiiradaha Cocos (Keeling) (+61) Colombia (+ 57) Comoros (+ 269) Congo (+ 243) Kongo, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee (+243) Cook Islands (+ 682) Costa Rica (+ 506) Cote D'Ivoire (+225) Croatia (+ 385) Cuba (+ 53) Curacao (+ 599) Czech Republic (+ 420) Denmark (+ 45) Jabuuti (+ 253) Dominica (+ 1767) Jamhuuriyadda Dominican (+ 1767) Ecuador (+ 593) Masar (+ 20) El Salvador (+ 503) Equatorial Guinea (+ 240) Eritrea (+ 291) Estonia (+ 372) Itoobiya (+ 251) Jasiiradaha Falkland (Malvinas) (+500) Faroe Islands (+ 298) Fiji (+ 679) Finland (+ 358) Faransiiska (+ 33) Faransiiska Guiana (+ 592) French Polynesia (+ 689) Gabon (+ 241) Gambia (+ 220) Georgia (+ 995) Germany (+ 49) Ghana (+ 233) Gibraltar (+ 350) Greece (+ 30) Greenland (+ 299) Grenada (+ 1473) Guadeloupe (+ 590) Guam (+ 1671) Guatemala (+ 502) Guernsey (+ 441481) Guinea (+ 224) Guinea-Bissau (+ 245) Guyana (+ 592) Haiti (+ 509) Honduras (+ 504) Hong Kong (+ 852) Hungary (+ 36) Iceland (+ 354) Hindiya (+ 91) Indonesia (+ 62) Iiraan, Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee (+98) Ciraaq (+ 964) Ireland (+ 353) Isle of Man (+ 441624) Israel (+ 972) Talyaaniga (+ 39) Jamaica (+ 1876) Japan (+ 81) Jersi (+ 441534) Jordan (+ 962) Kazakhstan (+ 7) Kenya (+ 254) Kiribati (+ 686) Waqooyiga Kuuriya (+ 850) Koonfurta Kuuriya (+ 82) Kuwait (+ 965) Kyrgyzstan (+ 996) Jamhuuriyadda Dimoqraadiga Dadka Lao (+856) Latvia (+ 371) Lebanon (+ 961) Lesotho (+ 266) Liberia (+ 231) Liibiya (+ 218) Liechtenstein (+ 423) Lithuania (+ 370) Luxembourg (+ 352) Macau (+853) Macedonia (+ 389) Madagaskar (+ 261) Malawi (+ 265) Malaysia (+ 60) Maldives (+ 960) Mali (+ 223) Malta (+ 356) Jasiiradaha Marshall (+ 692) Martinique (+ 596) Mauritania (+ 222) Mauritius (+230) Mayotte (+ 262) Mexico (+ 52) Micronesia, Dowladaha federaaliga ah ee (+691) Molcawa, Jamhuuriyadda Monaco (+ 377) Mongolia (+ 976) Montenegro (+ 382) Montserrat (+ 1664) Morocco (+ 212) Mozambique (+ 258) Myanmar (+ 95) Namibia (+ 264) Nauru (+ 674) Nepal (+ 977) Netherlands (+ 31) New Caledonia (+ 687) New Zealand (+ 64) Nicaragua (+ 505) Niger (+ 227) Nigeria (+ 234) Niue (+ 683) Jasiiradda Norfolk (+672) Jasiiradaha Waqooyiga Mariana (+1670) Norway (+ 47) Oman (+ 968) Baakistaan ​​(+92) Palau (+ 680) Dhulka Falastiin (+970) Panama (+ 507) Papua New Guinea (+ 675) Paraguay (+ 595) Peru (+ 51) Filibiin (+ 63) Jasiiradaha Pitcairn (+64) Poland (+ 48) Portugal (+ 351) Puerto Rico (+ 1) Qatar (+ 974) Jamhuuriyadda Qubrus (+357) Iskudhin (+ 262) Romania (+ 40) Xiriirka Ruushka (+7) Rwanda (+ 250) Saint Barthelemy (+ 590) Saint Helena (+ 290) Saint Kitts iyo Nevis (+1869) Saint Lucia (+ 1758) Saint Martin (+ 590) Saint Pierre iyo Miquelon (+508) Saint Vincent iyo Grenadines (+1784) Samoa (+685) San Marino (+ 378) Sao Tome iyo Principe (+239) Saudi Arabia (+ 966) Senegal (+ 221) Serbia (+ 381) Seychelles (+ 248) Sierra Leone (+ 232) Singapore (+ 65) Sint Maarten (qaybta Dutch) (+1721) Slovakia (+ 421) Slovenia (+ 386) Solomon Islands (+ 677) Soomaaliya (+ 252) Koonfur Afrika (+ 27) Koonfurta Georgia iyo jasiiradaha Sandwich-da (+500) Koonfurta Suudaan (+211) Spain (+ 34) Sri Lanka (+ 94) Suudaan (+ 249) Suriname (+ 597) Svalbard iyo Jan Mayen (+47) Swaziland (+ 268) Iswiidhan (+ 46) Switzerland (+ 41) Jamhuuriyadda Suuriya ee Siiriya (+963) Taiwan (+ 886) Tajikistan (+992) Tansaaniya, Jamhuuriyadda Midoobay ee (+255) Thailand (+ 66) Timor-Leste (+ 670) Togo (+ 228) Tokelau (+ 690) Tonga (+ 676) Trinidad iyo Tobago (+1868) Tunisia (+ 216) Turkiga (+ 90) Turkiga (+ 993) Turks iyo Jasiiradaha Caicos (+1649) Tuvalu (+ 688) Uganda (+ 256) Ukraine (+ 380) Imaaraadka Carabta (+ 971) Boqortooyada Midowday (+44) Mareykanka (+1) Uruguay (+ 598) Uzbekistan (+ 998) Vanuatu (+ 678) Vatican City (+ 379) Venezuela (+ 58) Vietnam (+ 84) Jasiiradaha bikradda, Ingiriiska (+1284) Jasiiradaha bikradaha, Mareykanka (+1340) Wallis iyo Futuna (+681) Yaman (+967) Zambia (+ 260) Zimbabwe (+ 263)
Xulo shaqo Farshaxan, dhaqan, madadaalo iyo isboorti Ganacsiga, maaliyadda iyo maamulka Waxbarashada, sharciga iyo bulshada, bulshada iyo adeegyada dowlada Caafimaadka Guri sameeye maamulka Soo-saarka iyo yutiilitida Milatariga / ciidamada qalabka sida Sayniska dabiiciga ah iyo kuwa la adeegsado iyo wixii la halmaala Kheyraadka dabiiciga, beeraha iyo wax soo saarka laxiriira fariistay Iibka iyo adeegga Ardayga Xirfadaha, gaadiidka iyo qalabka ka shaqeeya iyo wixii la halmaala Shaqo la'aan
Darajada shaqada *
Xulo cinwaanka shaqada
Magaca Shirkadda / Jaamacadda *
Taariikhda bilawga (sanadka) *
Xullo Sanadka Bilowga 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922
Magaalada ama Magaalada shaqada *
Dalka shaqada *
Weligaa laguu diiday fiiso ama ogolaansho, laguu diiday inaad gasho ama lagu amro inaad ka baxdo Kanada ama waddan kale? *
Diidmo kasta, fadlan sheeg waddanka kuu diiday iyo sabab *
Weligaa ma geysay, ma loo xiray, ma lagugu xukumay wax dembi ah oo ka dhacay waddan kasta? *
Xarig kasta, fadlan sheeg meesha (magaalada / waddanka), goorta (bisha / sanadka), nooca dembiga iyo xukunka*
Labadii sano ee la soo dhaafay, ma lagaa helay cudurka qaaxada? *
Ma leedahay mid ka mid ah xaaladahan caafimaad? *
Dooro Midkoodna cuduradan hoos ku xusan Waraabow aan la daaweyn Khamriga ama balwadda aan la daaweyn Dhibaatada caafimaadka dhimirka ee aan la daaweyn ee maskaxda
Waxa soo socda ee soo socdaa waa shuruudaha iyo shuruudaha, oo ay xukumaan sharciga Australia, oo ay dejisay degelkan adeegsadaha adeegsigiisa degelkan. Markaad gasho oo aad isticmaasho degelkan, waxaa laguu maleynayaa inaad aqrisay, fahantay, oo aad ogolaatay shuruudahaan, kuwaas oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo danaha shirkadda iyo isticmaalaha labadaba. Ereyada "codsadaha", "isticmaalaha", iyo "adiga" halkan waxay tixraacayaan codsadaha eTA ee Canada oo doonaya inuu ka codsado eTA-da Kanada iyada oo loo marayo degelkan iyo ereyada "anaga", "anaga", iyo "anaga" tixraac degelkan.
Waad ka faa'iideysan kartaa naftaada isticmaalka websaydhkayaga iyo adeegyada aan ku bixinno oo keliya markaad oggolaato dhammaan shuruudaha iyo shuruudaha lagu dejiyay halkan.
Lahaanshaha iyo Xaddidnaanta Isticmaalka Websaydhka
Websaydhkan waxaa iska leh oo keliya shirkad gaar loo leeyahay, iyada oo dhammaan xogteeda iyo waxyaabaha ku jira ay yihiin kuwo xuquuq leh oo leh xuquuq la mid ah. Annagu sinnaba uma nihin ama kuma xirnaano dowladda Kanada. Websaydhkan iyo adeegyada lagu bixiyo waxay ku kooban yihiin oo keliya adeegsi shakhsi ah, oo aan ganacsi ahayn oo looma isticmaali karo dano shaqsiyeed ama in loo iibiyo dhinac saddexaad. Sidoo kale kama faa'iidi kartid adeegyada ama macluumaadka ku jira halkan si kale. Ma beddeli kartid, nuqul ka samayn kartid, dib u isticmaali kartid, ama kala soo bixi kartid qayb ka mid ah degelkan adeeg ganacsi. Ma isticmaali kartid websaydhkan iyo adeegyadiisa illaa aad oggolaato inaad ku xirnaato oo aad u hoggaansanaato shuruudaha iyo shuruudaha isticmaalka websaydhka. Dhammaan xogta iyo content websaydhkan waa la daabacay
Ku saabsan Adeegyadayada iyo Nidaamka Bixinta
Waxaan nahay shirkad gaar loo leeyahay, adeeg bixiye saddexaad oo internetka ah oo saldhigeedu yahay Aasiya iyo Oceania oo sinnaba uguma xirna Dowladda Kanada ama Safaaradda Kanada. Adeegyada aan bixinno waa kuwa gelitaanka xogta iyo ka shaqeynta codsiyada eTA Visa Waiver ee loogu talagalay codsadayaasha ajnabiga ah ee u qalma ee doonaya inay booqdaan Kanada. Waxaan kaa caawin karnaa helitaanka Ruqsadda Safarka Elektiroonigga ah ama eTA ee Kanada oo ay kaa hesho Dowladda Kanada annaga oo kaa caawinayna buuxinta dalabkaaga, si habboon dib ugu eegeyno jawaabahaaga iyo macluumaadka aad soo gasho, tarjumidda wixii macluumaad ah haddii sidaas loo baahdo, iyadoo wax walba laga hubinayo saxsanaanta, dhammaystirka, iyo higgaadinta iyo naxwaha naxwaha.
Si loo socodsiiyo codsigaaga eTA Canada iyo si loo hubiyo in dalabkaaga la buuxiyo waxaan kula soo xiriiri karnaa taleefan ama emayl haddii aan kaa dooneyno macluumaad dheeraad ah adiga. Markaad si buuxda u buuxiso foomka dalabka degelkeenna, waxaad dib u eegi kartaa macluumaadka aad dhiibtay oo waxaad sameyn kartaa wixii isbeddel ah haddii loo baahdo. Intaa wixii ka dambeeya waxaa lagaa doonayaa inaad bixiso lacag bixinta adeegyadayada.
Intaa ka dib kooxdeena khubaro ah ayaa dib u eegi doona dalabkaaga kadibna u gudbin doona Dowlada Kanada si ay u ansixiso. Xaaladaha badankood waxaan awoodi doonnaa inaan ku siino waxqabad isla maalintaas ah isla markaana aan kuugu cusbooneysiinno xaaladda dalabkaaga email ahaan, haddii aysan jirin wax dib u dhac ah.
Websaydhkani ma damaanad qaadayo aqbalaadda ama oggolaanshaha codsiyada Kanada eTA. Adeegyadeenu kama gudbaan ka baaraandegista codsigaaga Canada eTA ka dib markay si sax ah u hubiyaan oo ay u eegaan faahfaahinta una soo gudbiyaan nidaamka Canada eTA.
Ansixinta ama diidmada dalabka ayaa gebi ahaanba ku xiran go'aanka Dowladda Kanada. Websaydhka ama wakiiladooda mas'uul kama noqon karaan diidmada suurtagalka ah ee dalabka codsadaha ee sababay, tusaale ahaan, macluumaad khaldan, maqan, ama aan dhammaystirnayn. Waa codsadaha mas'uuliyaddiisa inuu hubiyo inuu isagu ama iyadu bixiso macluumaad sax ah, sax ah, oo dhammaystiran.
Amniga iyo Hakinta Ku Meel Gaarka ah ee Adeegga
Si loo ilaaliyo loona sugo websaydhka iyo macluumaadka ku kaydsan keydkiisa, waxaan xaq u leenahay inaan badalno ama soo bandhigno talaabooyin cusub oo nabadgelyo ah iyadoon ogeysiis hore la helin, inaan ka noqonno iyo / ama xaddidno adeegsiga shaqsi kasta ee adeegsada degelkan, ama aan qaadanno wax kale tallaabooyinka noocan ah.
Waxaan sidoo kale xaq u leenahay inaan si ku meel gaar ah u hakino degelka iyo adeegyadiisa haddii ay dhacdo dayactirka nidaamka, ama waxyaabaha noocan oo kale ah oo ka baxsan koontaroolkayaga sida musiibooyinka dabiiciga ah, mudaaharaadyada, cusbooneysiinta barnaamijka, iwm, ama koronto lama filaan ah ama dab, ama isbeddelada maamulka nidaamka, dhibaatooyinka farsamada, ama sababo kasta oo kale oo caqabad ku ah shaqada bogga.
Isbedelka Shuruudaha iyo Xaaladaha
Waxaan xaq u leenahay inaan ku sameyno wixii isbedel ah shuruudaha iyo shuruudaha ku xiran isticmaalka isticmaale ee degelkan, sababo kala duwan sida amniga, sharciga, sharciyeynta, iwm. shuruudaha cusub ee isticmaalka waana masuuliyadaada inaad hubiso wixii isbeddel ah ama cusbooneysiin isku mid ah kahor intaadan sii wadin adeegsiga degelkan iyo adeegyada lagu bixiyo.
Haddii aad u muuqato inaad ku guuldareysatay inaad u hogaansanaato oo aad u dhaqanto si waafaqsan shuruudaha iyo shuruudaha ay dejisay degelkan, waxaan xaq u leenahay inaan joojino gelitaankaaga degelkan iyo adeegyadiisa.
Shuruudaha iyo shuruudaha halkaan lagu dejiyay waxaa xukuma oo hoos imanaya xukunka sharciga Australiya iyo haddii ay dhacdo dacwad sharciyeed kasta, dhinacyada oo dhan waxay hoos imaan doonaan xukunka maxkamadaha Australiya.
Waxaan kaa caawinnaa howsha iyo soo gudbinta arjiga eTA ee Kanada. Talada socdaalka ee waddanna kuma jiro adeegyadayada.
Nidaamkan asturnaanta wuxuu qeexayaa waxa websaydhkani ku sameeyo xogta ay ka soo ururiso dadka isticmaala iyo sida xogtaas looga shaqeeyo iyo ujeedooyinka laga leeyahay. Nidaamkani wuxuu khuseeyaa macluumaadka ay mareegtani uruuriso waxayna kugula socodsiineysaa waxa macluumaadkaaga shaqsiyeed ee ay uruuriso degelku iyo sida iyo cidda lala wadaagi karo macluumaadka la sheegay. Waxay sidoo kale kugula socodsiin doontaa sida aad u heli karto una maamuli karto xogta websaydhku ururiyo iyo xulashooyinka aad heli karto eek u saabsan isticmaalka xogtaada. Waxay sidoo kale mari doontaa habraacyada amniga ee ku yaal websaydhkan oo ka joogsan doona halkaas in si kasta oo khaldan loo isticmaalo xogtaada. Ugu dambeyntiina, waxay ku ogeysiin doontaa sida loo saxo khaladaadka ama khaladaadka ku jira macluumaadka haddii ay jiraan wax jira.
Adigoo adeegsanaya websaydhkan, waxaad ku raacsan tahay Nidaamka Asturnaanta iyo shuruudaha iyo shuruudaheeda.
Macluumaadka ay soo ururisay degelkan annagaa iska leh. Macluumaadka kaliya ee aan soo aruurin karno ama aan marin u leenahay waa midka si iskood ah noogu soo gudbiyey adeegsadaha iimaylka ama nooc kasta oo kale oo toos loola xiriiro. Macluumaadkan lama wadaagayo ama kama kireysano cid aan annagu leenahay. Macluumaadka lagaa soo ururiyey waxaa loo isticmaalaa oo keliya in laguu jawaabo adiga iyo in la dhammaystiro hawsha aad nala soo xiriirtay. Macluumaadkaaga lama wadaagi doono dhinac saddexaad oo ka baxsan ururkeena marka laga reebo markii ay lagama maarmaan tahay in sidaas la sameeyo si loo maareeyo codsigaaga.
Helitaanka Isticmaalaha Isticmaalka Macluumaadkooda
Waxaad nagala soo xiriiri kartaa cinwaanka emaylka ee ku qoran degelkeenna si aad u ogaato xogta ay shabakaddeenna kaa soo ururisay, haddii ay jiraan; inaad naga badasho ama aan saxno wixii xog ah ee adiga kugu saabsan ee aan hayno; inaad naga tirtirto dhammaan xogta ay shabakaddu kaa soo ururisay; ama si fudud loogu muujiyo welwelkaaga iyo weydiimahaaga ku saabsan adeegsiga aan ka sameysanno xogta degelkeennu kaa soo ururiyo. Waxaad sidoo kale leedahay ikhtiyaarka ah inaad ka baxdo xiriir kasta oo mustaqbalka nala soo xiriiraya.
Socdaalka, Qaxootiga iyo Dhalashada Kanada (IRCC) waxay u baahan tahay macluumaadkan si eTA -gaaga Kanada loogu go'aamiyo habka go'aan qaadashada oo xog -ogaal ah iyo in aan laguu celin wakhtiga aad fuusho ama wakhtiga aad Hindiya soo gasho.
Waxaan qaadeynaa dhammaan taxaddarrada amniga si loo ilaaliyo macluumaadka lagaa soo ururiyey websaydhka. Macluumaad kasta oo xasaasi ah, oo gaar ah oo aad adigu ku soo gudbiso websaydhka waxaa laga ilaaliyaa khadka tooska ah iyo kan khadka tooska ahba. Dhammaan macluumaadka xasaasiga ah, tusaale ahaan, kaarka amaahda ama xogta kaarka deynta, ayaa nala siiyaa si badbaado leh kadib markii sirta la sameeyo. Astaamaha qufulka xiran ee biraawsarkaaga ama 'https' ee bilowga URL waa caddeyn isku mid ah. Sidaa darteed, sirta ayaa naga caawinaysa inaan ku ilaalino macluumaadkaaga shakhsiyeed iyo kuwa xasaasiga ah khadka tooska ah.
Sidoo kale, waxaan ku ilaalineynaa macluumaadkaaga khadka tooska ah iyadoo la siinayo helitaanka macluumaad kasta oo shaqsiyan kuu aqoonsanaya kaliya xulashada shaqaalaha u baahan macluumaadka si ay u qabtaan shaqo ka shaqeysa dalabkaaga. Kombiyuutarada iyo server-yada ay macluumaadkaagu ku kaydsan yihiin sidoo kale waa la ilaaliyay oo ammaan ah.
Ka shaqeynta Codsigaaga / Amarkaaga
Sida ku xusan shuruudahayada iyo shuruudahayada, waxaa lagugu igmaday inaad na siiso macluumaad loo baahan yahay si loo socodsiiyo dalabkaaga ama amarka lagu sameeyay degelkeenna. Tan waxaa ka mid ah macluumaadka shakhsiyeed, xiriirka, safarka, iyo macluumaadka noolaha (tusaale ahaan, magacaaga oo buuxa, taariikhda dhalashadaada, cinwaankaaga, cinwaanka emaylka, macluumaadka baasaboorka, safarka socdaalka, iwm), iyo sidoo kale macluumaadka maaliyadeed sida kaarka deynta / kaarka lambarka iyo taariikhda ay dhacayaan, iwm.
Waa inaad na siisaa macluumaadkan inta aad gudbinayso codsi aad ku codsanayso Kanada eTA. Macluumaadkan looma adeegsan doono ujeedooyin suuq-geyn ah laakiin kaliya si loo fuliyo amarkaaga. Haddii aan wax dhib ah ku aragno isla wax u qabashada ama aan uga baahanno macluumaad dheeraad ah, waxaan u isticmaali doonnaa macluumaadka xiriirka ee aad bixiso si aan kula soo xiriirno.
Cookie waa fayl qoraal yar ama xog ah oo ay soo diraan degel iyadoo la adeegsanayo biraawsarka webka isticmaalaha si loogu kaydiyo kombiyuutarka isticmaale ee uruuriya macluumaadka diiwaanka caadiga ah iyo sidoo kale macluumaadka akhlaaqda booqdaha iyadoo la raacayo adeegsiga iyo adeegsiga websaydhka. Waxaan u adeegsanaa cookies si aan u hubino in websaydhkeenu u shaqeeyo si wax ku ool ah oo habsami leh isla markaana loo horumariyo khibrada isticmaalaha. Waxaa jira laba nooc oo buskud ah oo uu adeegsado websaydhkani - cookie site, taas oo muhiim u ah adeegsadaha isticmaalka websaydhka iyo ka shaqaynta websaydhka codsigooda oo aan sinnaba ula xiriirin macluumaadka shakhsi ahaaneed ee isticmaalaha; iyo cookie analytics, oo raadraaca isticmaalayaasha isla markaana ka caawiya cabbiraadda waxqabadka bogga. Waad ka bixi kartaa cookies-ka falanqaynta.
Wax ka badalida iyo isbedelada ku yimaada Nidaamkan Qarsoodiga ah
Siyaasaddeena sharciga ah, Shuruudaheena iyo Shuruudaheena, falcelinteena ku aadan sharciga Dowlada iyo qodobo kale ayaa nagu qasbi kara inaan isbedelo ku sameyno Nidaamka Asturnaanta. Waa dukumenti nool oo isbeddelaya waxaanan isbeddel ku samayn karnaa Nidaamkan Qarsoodiga ah ama waxaa laga yaabaa ama inaanu kuu soo sheegayno isbeddelada siyaasaddan.
Isbedelada lagu sameeyay siyaasadan asturnaanta ayaa si dhakhso ah u dhaqan gala isla marka la daabaco siyaasaddan isla markaana waxay dhaqan galaa isla markiiba.
Waa mas'uuliyada saaran isticmaaleyaasha in isaga ama iyadu lagu wargaliyo siyaasadan qaaska ah. Markaad dhameystirayso Foomka Codsiga Visa Canada, waxaan kaa codsanay inaad ogolaato Shuruudaheena iyo Shuruudaheena iyo Nidaamkayaga Asturnaanta. Waxaa lagu siinayaa fursad aad ku aqriso, dib ugu eegto oo aad noogu soo celiso ra'yi kusaabsan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah kahor soo gudbinta dalabkaaga iyo lacag bixintayada.
Xiriiro kasta oo ku jira degelkan websaydhada kale waa inuu gujiyaa isticmaalaha hadba sida ay u kala doortaan. Annagu mas'uul kama nihin siyaasadaha asturnaanta ee degellada kale adeegsadayaashana waxaa lagula talinayaa inay akhriyaan naftooda qaanuunka arrimaha gaarka ah bogagga kale
Waad naga soo gaari kartaa
Waxaa nala soo xiriiri karaa adoo adeegsanaya bartayada miiska caawinta. Waxaan soo dhaweynaynaa jawaab -celinta, soo jeedinta, talooyinka iyo aagagga hagaajinta ee adeegsadayaashayada. Waxaan rajeyneynaa inaan horumarin ku sameyno masraxa horeba ugu wanaagsan adduunka ee lagu dalbado Visa -ka Kanada ee Kanada.